युनाइटेड फाइनान्सलाई प्राप्ति गर्दै नबिल बैंक, १०० : ३५ शेयर स्वाप रेसियो
वैशाख १७, काठमाडौं । नबिल बैंकले युनाइटेड फाइनान्स कम्पनीलाई प्राप्ति गर्ने भएको छ । शुक्रवार नबिल बैंक र युनाइटेड फाइनान्सबिच प्राप्ति सम्बन्धि सम्झौता भएको हो ।
नबिल बैंकले युनाइटेड फाइनान्सलाई १०० कित्ता शेयर बराबर ३५ कित्ता शेयर आदान प्रदान गर्ने गरी प्राप्ति गर्न लागेको जानकारी दिएको छ । यस आधारमा युनाइटेड फाइनान्सको १०० कित्ता शेयर हुने शेयरधनीहरुले नबिल बैंकको ३५ कित्ता शेयर प्राप्त गर्नेछन् ।
एनसीसी बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकसँग मर्जरको हल्ला चलिरहेको अवस्थामा नबिल बैंकले शुक्रवार युनाइटेड फाइनान्सलाई प्राप्ति गर्ने प्रारम्भिक प्रकृया अघि बढाएको हो ।
हाल नबिल बैंकको चुक्तापूँजी रू. १३ अर्ब ४८ करोड १ लाख ५९ हजार रहेको छ भने युनाइटेड फाइनान्सको रू. १ अर्ब ४ करोड ८ लाख ३४ हजार छ । प्राप्ति पश्चात नबिलको चुक्तापूँजी रू. १४ अर्ब ५२ करोड ९ लाख ९३ हजार पुग्नेछ ।
चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म नबिल बैंक लिमिटेडको वितरण योग्य नाफा रू. ३ अर्ब ८० करोड २४ लाख ९५ हजार रहेको छ । बैंकले यस वर्ष रू. ३ अर्ब १५ करोड ८६ लाख ८६ हजार खुद नाफा गरेको छ ।
रिटर्न अर्निङ सहित बैंकको जगेडा कोष रकम रू. १७ अर्ब ५२ करोड ६८ लाख ३० हजार रहेको छ । यस वर्ष रू. २ खर्ब ८ अर्ब ३३ करोड ३८ लाख १८ हजार निक्षेप संकलन गरेको नबिल बैंकले रू. १ खर्ब ८६ अर्ब १९ करोड ३१ लाख ९८ हजार कर्जा प्रवाह गरेको छ । निष्क्रिय कर्जा गत वर्ष शून्य दशमलव ६३ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष शून्य दशमलव ४८ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी रू. ३६ दशमलव ४० रहेको छ ।
त्यस्तै, तेस्रो त्रैमाससम्म युनाइटेड फाइनान्सको वितरण योग्य नाफा रू. ४ करोड ७३ लाख ५४ हजार रहेको छ । उक्त अवधिसम्म यस कम्पनीले रू. ८ करोड १६ लाख ५९ हजार खुद नाफा गरेको छ ।
युनाइटेड फाइनान्सको शेयर प्रिमियम रकम रू. १५ करोड ८६ लाख ८४ हजार, रिटर्न अर्निङ रू. १६ करोड ६८ लाख ६१ हजार र रिजर्भ रू. २९ करोड ३६ लाख ३९ हजार रहेको छ ।